Guide To Naypyitaw
Our Apps (Free)
Korean Words Collection
Dhamma Thukha Tawya
Our Apps (Paid)
Pattern Speaking English
900 Speaking English
Web Site Building (Wordpress)
You are here: Products & Services >> Our Apps (Free) >> Guide To Naypyitaw
နေပြည်တော် ခရီးသွားလမ်းညွှန်ဆော့ဝဲကို ဖန်တီးရခြင်းရဲ့ ပထမဆုံး ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ နေပြည်တော်ကို အလည်အပတ်လာရောက်ကြမယ့်သူတွေနဲ့ နေပြည်တော်အတွင်း နေထိုင်ကြသူတွေ တဖက်တလမ်းကနေ အသုံးဝင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပြီး အချက်အလက်များကို စုစည်းပေးထားခြင်းပါ။ နေပြည်တော်ကို အလည်အပတ် ရောက်လာကြမယ့်သူတွေ အတွက်တော့ သွားရေးလာရေးအတွက် ယာဉ်လိုင်းများရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်များ၊ ကားဂိတ်၊ ကားကွင်းတည်နေရာများ၊ မီးရထားဘူတာ တည်နေရာများ၊ လေယာဉ်လက်မှတ်အရောင်း ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင် ဖုန်းနံပါတ်များ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
နေပြည်တော်တွင် ခဏတာ တည်ခိုဖို့အတွက် ဟိုတယ်နဲ့ တည်ခိုခန်း တည်နေရာများ၊ အဟာရ ဖြည့်တင်းဖို့အတွက် စားသောက်ဆိုင် တည်နေရာများနဲ့ အပန်းဖြေလည်ပတ်စရာ တည်နေရာများကိုလည်း ထည့်သွင်း စုစည်းပေးထားပါတယ်။ မြေပုံကို အသုံးချပြီး ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ မိမိ ရောက်ရှိနေတဲ့ အနီးဆုံး ဟိုတယ်၊ တည်းခိုခန်း၊ စားသောက်ဆိုင်များနဲ့ လည်ပတ်စရာများရဲ့ တည်နေရာကို ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ ဖုန်းရဲ့ GPS ကို ဖွင့်ထားပေးဖို့တော့ လိုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ သွားရောက် လည်ပတ်မယ့် နေရာအချို့ကို ဆောင်းပါးတိုနဲ့ ဓာတ်ပုံများ ထည့်သွင်း ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ကျန်ရှိတဲ့ နေရာများကိုလည်း ဓာတ်ပုံများနဲ့တကွ ဆောင်းပါးများ ဆက်လက် ရေးသား ထည့်သွင်းပေးသွားဖို့ ရှိပါတယ်။
အစိုးရရုံး အလုပ်ကိစ္စနဲ့ နေပြည်တော်သို့ လာရောက်ကြတဲ့အခါ အခက်အခဲတစ်ခုက ရုံးအမှတ်များနဲ့ ရုံးဌာနများ တည်နေရာ မသိခဲ့ပါက ရှာရဖွေရတာ အချိန်ကုန်ပြီး အကျိုးမရှိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရုံးအမှတ်တစ်ခုမှာ တခြားဝန်ကြီးဌာနများ ပေါင်းစပ်ဖွင့်ထားကြတဲ့အတွက် ရှုတ်ထွေးမှုများဖြစ်ပေါ်တတ်ကြပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် တည်နေရာနဲ့ ရုံးအမှတ်အလိုက် ဘယ်ဌာနများ ပါဝင် လျှက်ရှိတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြပေးထားတဲ့ အတွက် ဝန်ကြီးဌာနအမည်အလိုက် မိမိတို့ သွားရောက်ချင်တဲ့ ဌာနကို တည်နေရာ အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြေပုံအသုံးပြုကာ လမ်းကြောင်းဆွဲကြည့်ပြီး အဲဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်း ဂရုပြုလိုက်ပါ သွားပါက အဆင်ပြေသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တခါတရံမှာလည်း အကြောင်းကိစ္စရှိလို့ ဌာနဆိုင်ရာ အိမ်ယာတစ်ခုခုကို သွားရောက်ဖို့ လိုအပ်ခဲ့ပါကလည်း အိမ်ယာအမည်နဲ့တကွ တိုက်နံပါတ်များကိုလည်း လွယ်ကူစွာ မြေပုံအသုံးပြုကာ သွားရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရပ်ကွက်နဲ့ ကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာများကိုလည်း လိုအပ်တဲ့အခါ အသုံးပြုနိုင်ရန် ကောက်ယူ စုစည်းပေးထားပြီး အခြားမြို့နယ်များရဲ့ ယေဘုယတည်နေရာများကိုလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ နေပြည်တော်သို့ ရောက်ရှိစဉ် အရေးအပေါ်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာပါက အသုံးပြုနိုင်ရန် အရေးပေါ်ဖုန်းနံပါတ်များနဲ့ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း၊ ဆေးဆိုင်တည်နေရာများကိုလည်း ကောက်ယူထည့်သွင်းလျှက် ရှိပါတယ်။ ဒါအပြင် မြေပုံအသုံးပြုကာ မိမိတို့ သိမ်းထားချင်သည့် တည်နေရာများကိုလည်း အမည်၊ ခေါင်းစဉ်နဲ့တကွ ဆော့ဝဲတွင် ထည့်သွင်းမှတ်သားထားနိုင်ပြီး လိုအပ်ပါက ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းနဲ့ မျှဝေခြင်းများကို အလွယ်တကူ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆော့ဝဲအတွင်းရှိ တည်နေရာများအားလုံးဆီကို အလွယ်တကူ လမ်းကြောင်းဆွဲပြီး သွားနိုင်သည့်အတွက် အဆင်ပြေမှု ပိုမိုရရှိလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။
ဆော့ဝဲကို ပထမဆုံး စတင်အသုံးပြုပါက မိမိတို့ တည်နေရာကို ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါက အဲဒီတည်နေရာနဲ့ အကွာအဝေး ဘယ်လောက်မှာ တည်ရှိနေတယ်ဆိုတာကို မျဉ်းဖြောင့်တိုင်းတာပေးမည်အပြင် ရွေးချယ်ထားတဲ့ တည်နေရာရဲ့ မိုးလေဝသ အခြေအနေကိုလည်း အလွယ်တကူ တွေ့ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုလည်း မိမိတို့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ထားရှိနိုင်ပြီး အခြားနှုန်းထားများကိုလည်း ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲမှာ အဓိက စာလုံးအမျိုးအစားအဖြစ် ယူနီကုတ်ကို ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ မိမိတို့ဖုန်းရဲ့ လိုအပ်ချက်အရ ဇော်ဂျီစာလုံး ၂ မျိုးကို ပြောင်းလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။
နေပြည်တော် ခရီးသွားလမ်းညွှန်ဆော့ဝဲတွင် မိမိတို့ လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ကဏ္ဍအလိုက် အခမဲ့ ထည့်သွင်းဖော်ပြနိုင်သည့်အတွက် ဆော့ဝဲအတွင်းရှိ မိမိ လုပ်ငန်း ပါဝင်နိုင်ရန် (Add Your Business) မှတဆင့် အချက်အလက်များထည့်သွင်းကာ ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်ပါက မေးမြန်းစုံစမ်းဆက်သွယ်နိုင်ရန် ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ အီးမေးလ်လိပ်စာတို့ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ပထမဆုံး ဗားရှင်းဖြစ်တဲ့အတွက် သုံးစွဲသူဦးရေ နည်းပါးနေမှာဖြစ်ပြီး ဆော့ဝဲ အသုံးဝင်မှုပေါ်မူတည်ပြီး သုံးစွဲသူဦးရေ တိုးတက်များပြားလာပါက မိမိတို့ လုပ်ငန်းများကိုလည်း စားသုံးသူများ သိရှိနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး ပိုမိုများပြားလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် Guide To Naypyitaw Facebook Page လည်း ဖန်းတီးပေးထားသည့်အတွက် Like Follow လုပ်ထားပါက အလွယ်တကူ ဆက်သွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နေပြည်တော် ခရီးသွားလမ်းညွှန် App အေပီကေ ဒေါင်းမယ်.
Click the picture or here to download Guide To Naypyitaw.
Copyright 2022 by eBusiness IT Solutions